बाहिरियो केपी ओलीको चुनावी मास्टरप्लान, प्रचण्ड, बाबुराम र माधव भयङ्कर ठूलो तनावमा ! - jagritikhabar.com
बाहिरियो केपी ओलीको चुनावी मास्टरप्लान, प्रचण्ड, बाबुराम र माधव भयङ्कर ठूलो तनावमा !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय निकै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । उनले विरोधीलाई तारो बनाएर आफ्ना गतिविधी अगाडी बढाएका हुन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधीप्रति निकै आक्रामक हुने गर्छन् । उनले पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईप्रति शब्दवाण प्रहार गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र बाबुराममाथि माओवादी द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मृत्युको दोष लगाउन थालेका छन् । उनले दुवैको नाम लिएर आइतबार एक कार्यक्रममा भने, १७ हजार मर्दा प्रचण्ड र बाबुराम कसरी बाँचे ? प्रचण्ड र बाबुरामले विदेशीको इशारामा देशमा हिंसा मच्चाएको आरोप समेत लगाइरहेका छन् ।
ओली माधवकुमार नेपालविरुद्ध झन् आक्रामक बन्दै गएका छन् । उनले नेपाल आफू बन्नभन्दा एमाले बिगार्न लागेको आरोप लगाइरहेका छन् ।